Baarlamaankii Taksiileyda:”Halkaa ha ii joogto” - Warka gudaha Somaliya - Local News in Somalia
Home WARKA GUDAHA Baarlamaankii Taksiileyda:”Halkaa ha ii joogto”
Baarlamaankii Taksiileyda:”Halkaa ha ii joogto”
Dalkaan sweden waxaa aad ugu badan soomaalida ka shaqeeya suuqa taksiyada,qaar waa dareewalo,qaarna waa mulkiilayaal taksi oo iyagoo loo shaqeeyaa.
Galabta ayaan oo ag maray boosteejo taksiyadu ka baxaan oo magaaladayda ku taal. Waxaa goobta taagan 4 dareewal iyo taksiyadooda oo meesha yaal. Ragga dareewaliinta ah ee meesha taagan waa Roobsuge, saylaan, onkod iyo mahiigaan. Dood adag oo siyaasada soomaaliya ku saabsan baa dareewalada ka dhex aloosan.
Farmaajo, waa sidaas,kheyraa ka daran, ciladu waa dowlad goboledyada ,maya shacabkaa qaldan iwm baa dooda ku jira. Balse arrinta yaabka leh ayaa ah qaabka qof walbaa dooda uga baxaayo. Mahiigaan oo nin dheer oo hadal badan leh baa raggii oo dhan aamusiyey,waxaana uu ku dhiiran yahay fikirka ah in Farmaajo guuldaraystay oo la casilo.
Balse Mahiigaan oo doodii bartanka kaga jira oo xiiqsan ayaa waxaa usoo dhacay dalab taksi, kaasoo oranaaya meel 100 km jirta qof kasoo qaad.
Mahiigaan talefonkii ayuu eegay kolkaa ayuu yidhi ” Halkaa ha ii joogto waana dhaqaajiyey,si xowli ah ayuu taksigiisii u kaxaystay. Roobsuge ayaa yidhi ninkaas waa tegey ee kheyre aan ka hadalo, balse kolkii doodii aan bilownay ayaa Roobsugena dalab u yimi waana dhaqaajiyey isagoo leh beri baan sii wadnaa.
Taksiile saylaan baa isoo eegay oo yidhi ” macalin see adiga kuula muuqataa, sow dowlad goboledyadu dhib ma wadaan”. Waxaan bilaabay inaan sharaxo qaabka federaalka iyo meelaha wax ka qaldan yihiin.Goor uu mudane saylaan si fiican ii dhegeysanaayo ayaa isagina dalabkiisii yimi.waana ka buskiciyey.
Aniga iyo onkod baa soo haray. Onkod wuxuu yidhi tan dowlad goboledka ma xiisaynayo oo dareewal saylaan baa lahaa balse dowlada farmaajo igu celi.
Farmaajo waa nin debecsan buu ku bilaabay. Anigoon ka jawaabin ayaan maqlay onkod oo leh dalab degdeg ah ayaa yimi, waana uu dhaqaajey isgoo leh nabaday macalin ragii kale baan beri lasii wadayaa. Baarlamkii aan martida u ahaa ee taksiileyda keligay baa kusoo haray.Ana meeshii waan ka tegey.
Baarlamaanka taksiileyda waxaan ka bartay in dooda shacabku siyaasada ka doodo ay tahay waxuun wakhtiga la isku dhaafiyo sida isboortiga kala duwan. Waa nooc hiwaayad cusub ah balse danta qofku waa meesheedii.
Dooda Baarlamaanka taksiilayaasha waxaad moodaa inuuba la mid yahay dooda ka socota baarlamaanada soomaaliya ee qabiilka lagu soo doortay, halkaasoo nin weliba dantiisa gaara ah leeyahay, dooduna aanay miro dhalin ee meeshii la doono looga tago.